Tahaka ny ahoana ny andriamanitra? | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Malagasy > Mazava ho azy fa ny Baiboly > Ahoana ny amin'Andriamanitra?
Araka ny fijoroana ho vavolombelona ao amin'ny Soratra Masina, Andriamanitra dia olona iray ao anaty telo mandrakizay, mitovy ary mitovy: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Izy irery ihany no Andriamanitra marina, mandrakizay, tsy miova, tsy manam-petra, tsy mahay, mahay manaja, manaja. Izy no mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpiaro an'izao rehetra izao sy loharanon'ny famonjena ho an'ny olona. Na dia somary tsy takatry ny saina aza, Andriamanitra dia mihetsika mivantana sy manokana amin'ny olona. Andriamanitra dia fitiavana sy hatsaram-panahy tsy manam-petra (Marka 12,29:1; 1,17 Timoty 4,6:28,19; Efesianina 1: 4,8; Matio 5,20:2,11; 16,27 Jaona 2: 13,13; 1:8,4; Titosy 6; Jaona; Korintiana ; Korintiana).
«Andriamanitra, ny Ray, no olona voalohany ao amin'ny Andriamanitra, ilay olona tsy nisy fiaviany, izay nateraka ny Zanaka hatrizay hatrizay ary avy amin'ny Zanaka no itondran'ny Fanahy Masina mandrakizay. Ny Ray, izay nahary ny zava-drehetra hita sy tsy hita tamin'ny Zanaka, dia mandefa ny Zanaka mba hahazoantsika famonjena ary manome ny Fanahy Masina ho fanavaozana sy fanekena ho zanak'Andriamanitra » (Jaona 1,1.14, 18; Romana 15,6; Kolosiana 1,15-16; Jaona 3,16; 14,26; 15,26; Romana 8,14-17; Asan’ny Apostoly 17,28).
Andriamanitra ve no namorona antsika sa Andriamanitra no namorona antsika?
Andriamanitra tsy mpivavaka, tsara fanahy, "iray amintsika, amerikana, kapitalista" no lohatenin'ny boky vao navoaka. Miresaka fanazavana momba an Andriamanitra momba izany izy.
Fanatanjahan-tena mahaliana ny fandinihana ny fomba nanamboaran'Andriamanitra ny fananganana antsika tamin'ny alàlan'ny fianakaviantsika sy ny namantsika; amin'ny alàlan'ny literatiora sy amin'ny alàlan'ny kanto; amin'ny alàlan'ny fahitalavitra sy ny haino aman-jery; amin'ny alàlan'ny hira sy ny angano; amin'ny alàlan'ny zavatra ilaintsika sy ilaintsika manokana; ary mazava ho azy amin'ny alàlan'ny traikefa ara-pivavahana sy filozofia malaza. Ny zava-misy dia Andriamanitra dia tsy mpanorina na foto-kevitra. Andriamanitra dia tsy hevitra, fa tsy hevitry ny saintsika manan-tsaina.
Araka ny fahitana ny Baiboly, ny zava-drehetra, na dia ny eritreritsika sy ny fahaizantsika mamolavola hevitra aza Andriamanitra tsy noforoninay na toetrany sy toetrany tsy noforoninay (Kolosiana 1,16-17; Hebreo 1,3); andriamanitra izay andriamanitra tsotra. Tsy misy fiandohana na fiafarana Andriamanitra.
Tamin'ny voalohany dia tsy nisy fihevitr'olombelona momba an'Andriamanitra, fa nisy kosa tany am-piandohana (fanondroana ara-nofo izay ampiasain'Andriamanitra mba hahatakarantsika voafetra) Andriamanitra (Genesisy 1; Jaona 1,1). Tsy Andriamanitra no namoronanay anao, fa Andriamanitra no namorona antsika tahaka ny endriny (Genesisy 1:1,27). Andriamanitra dia isika. Andriamanitra mandrakizay no mpamorona ny zava-drehetra (Asan’ny Apostoly 17,24: 25-40,28); Isaia, sns.) Ary amin'ny sitrapony ihany no misy ny zava-drehetra.
Boky maro no mamakafaka momba ny toetran'Andriamanitra. Tsy isalasalana fa afaka mahita lisitrà adjectif sy anarana izay mamaritra ny fiheverantsika hoe iza Andriamanitra sy izay ataony. Ny tanjon'ity fandinihana ity kosa dia ny manamarika ny fomba namaritan'Andriamanitra ny Soratra Masina sy ny momba ny antony maha zava-dehibe ny mpino ireo.
Ny Baiboly dia mamaritra ny Mpamorona ho mandrakizay, tsy hita maso, manavakassfarany sady Mahery indrindra
Andriamanitra talohan'ny nahariana azy (Salamo 90,2) ary “velona mandrakizay” izy (Isaia 57,15). «Tsy mbola nisy nahita an’Andriamanitra» (Jaona 1,18), ary tsy ara-batana izy, fa "Andriamanitra dia Fanahy" (Jaona 4,24). Tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny habaka izany, ary tsy misy takona amin'izany (Salamo 139,1: 12-1; 8,27 Mpanjaka 23,24; Jeremia). “Mahalala ny zavatra rehetra” izy (1 Jaona 3,20).
Ao amin'ny Genesisy 1: 17,1 dia nanambara tamin'i Abrahama Andriamanitra hoe: "Izaho no Andriamanitra Mahery Indrindra", ary ao amin'ny Apokalypsy 4,8, ny zava-manan'aina efatra dia manambara hoe: "Masina, masina, masina, Andriamanitra Tsitoha izay tonga tany ary iza ary eo ary iza no ho avy ». «Mahery ny feon'ny Tompo, mahafinaritra ny feon'ny Tompo» (Salamo 29,4).
Nanome torolàlana an'i Timoty i Paoly: «Fa ho an'Andriamanitra, ny Mpanjaka mandrakizay, Ilay tsy mety simba sy tsy hita, Andriamanitra irery ihany, dia haja sy voninahitra mandrakizay! Amen " (1 Timoty 1,17). Ny famaritana toy izany momba ny andriamanitra dia hita ao amin'ny literatiora mpanompo sampy sy amin'ny fombafomba ara-pinoana tsy kristiana maro.
Nanoro hevitra i Paoly fa tokony haseho amin'ny olona rehetra ny fiandrianan'Andriamanitra raha mibanjina ny fahagagana ny fahariana. "Satria," hoy izy nanoratra, "tsy hita maso an'Andriamanitra, ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia hita avy amin'ny asany hatramin'ny niorenan'izao tontolo izao" (Romana 1,20).
Mazava ny fomba fahitan'i Paoly: ny olona "latsaka tamin'ny tsy fahaizany tao an-tsainy (Romana 1,21:17,22) ary namorona ny fivavahany sy ny fanompoan-tsampy izy ireo. Notsipihiny koa ao amin'ny Asan’ny Apostoly 31 fa ny olona dia afaka mifangaro marina momba ny toetran’Andriamanitra.
Misy tsy fitoviana tsara ve eo amin'ny Andriamanitra Kristiana sy ireo andriamanitra hafa?
Avy amin'ny fomba fijerin'ny Baiboly, ny sampy, ny andriamanitry ny Grika, Romana, Mesopotamia ary ny angano hafa, ny zavatra ivavahana amin'izao fotoana izao sy taloha, dia tsy misy dikany izany satria "ny Tompo, Andriamanitsika, ny Tompo irery" (Deoteronomia 5:6,4). Tsy misy andriamanitra afa-tsy ilay tena Andriamanitra (Eksodosy 2:15,11; 1 Mpanjaka 8,23:86,8; Salamo 95,3;).
Nanazava i Isaia fa andriamanitra hafa dia "tsinontsinona". (Isaia 41,24), ary nanamafy i Paoly fa ireny "andriamanitra ireny" dia tsy misy maha-andriamanitra satria "tsy misy Andriamanitra afa-tsy Ilay," Andriamanitra Rain'andriamanitra izay misy ny zavatra rehetra. " (1 Korintiana 8,4: 6). «Tsy manana ray ve isika rehetra? Tsy Andriamanitra ve no namorona antsika? » Ny Mpaminany Malakia dia nanontany tamim-pinoana. Jereo ihany koa ny Efesiana 4,6.
Zava-dehibe ho an'ny mpino ny mankasitraka ny fahalalan'Andriamanitra sy ny fahatahorany ilay Andriamanitra tokana. Na izany aza, tsy ampy izany amin'ny tenany. "Jereo, lehibe Andriamanitra ary tsy takatry ny saina, tsy misy olona afaka manadihady ny isan'ny taonany" (Joba 36,26). Ny tsy fitoviana miavaka eo amin'ny fanompoam-pivavahana amin'ny andriamanitra ara-Baiboly sy ny fiankohofana amin'ireo andriamanitra antsoina hoe andriamanitra dia maniry antsika hahafantatra azy tsara, ary maniry ny hahafantatra antsika manokana sy manokana koa izy. Andriamanitra Ray dia tsy te hifandray amintsika lavitra. Izy no "akaiky antsika" fa tsy "andriamanitra lavitra" (Jeremia 23,23).
Noho izany Andriamanitra iray izay endrika nahariana antsika dia iray. Ny iray amin'ireo fiantraikany amin'ny fanaovana azy araka ny endrik'Andriamanitra dia ny fahafahantsika ho tonga tahaka azy. Fa manao ahoana Andriamanitra? Ny soratra masina dia manokana habaka malalaka amin'ny fanambarana hoe iza Andriamanitra ary inona izy. Andeha hodinihintsika ny hevitra ara-Baiboly sasany momba an'Andriamanitra, ary ho hitantsika fa ny fahatakarana ny maha-Andriamanitra dia mandrisika toetra ara-panahy hivelatra amin'ny mpino amin'ny fifandraisany amin'ny olon-kafa.
Ny zava-dehibe dia tsy mampianatra ny mino ny taratry ny endrik'Andriamanitra ny Soratra Masina amin'ny fahalehibeazana, ny omnipotence, ny omnisence sns. Masina Andriamanitra (Apokalypsy 6,10:1; 2,2 Samoela 78,4: 99,9; Salamo 111,9;;). Andriamanitra dia be voninahitra amin'ny fahamasinany (Genesisy 2:15,11). Maro ny teôlôjia no mamaritra ny fahamasinana ho toy ny fanjakana misaraka na manokan-tena ho fikasana masina. Ny fahamasinana dia fitambaran'ny toetra rehetra izay mamaritra hoe iza Andriamanitra ary manavaka azy amin'andriamani-diso.
Milaza amintsika ny Hebreo 2,14 fa raha tsy misy fahamasinana dia "tsy hisy olona hahita ny Tompo"; «... Nefa toy ny masina izay niantso anao, dia tokony ho masina koa ianao amin'ny fiovanao rehetra» (1 Petera 1,15-16; Levitikosy 3). Tokony "hizara ny fahamasinany" isika (Heb. 12,10). Andriamanitra dia fitiavana ary feno famindram-po (1 Jaona 4,8: 112,4; Salamo 145,8: 1;). Ny andalana etsy ambony ao amin'ny Jaona dia milaza fa ireo izay mahalala an'Andriamanitra dia azo fantarina amin'ny fiahiany am-po ny hafa satria Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitiavana dia namelana tao anatin'ny andriamanitra "talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao" (Jaona 17,24) satria ny fitiavana dia toetran'Andriamanitra.
Satria maneho famindram-po [fangorahana] izy, dia tokony hifaneho famindram-po koa isika (1 Petera 3,8: 7,9, Zakaria). Andriamanitra dia mamindra fo, mamindra fo, mamela heloka (1 Petera 2,3: 2; Eksodosy 34,6; Salamo 86,15; 111,4; 116,5).
Ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra dia «ny hatsarany lehibe» (Cl 3,2). Vonona Andriamanitra «hamela heloka, feno famindrampo, mamindra fo, manam-paharetana ary be hatsaram-panahy» (Nehemia 9,17). «Fa aminao, ry Tompo, Andriamanitray, dia misy famindram-po sy famelan-keloka. Satria nivadi-pinoana izahay » (Daniela 9,9).
"Andriamanitry ny fahasoavana rehetra" (1 Petera 5,10) manantena ny hiparitahan'ny fahasoavany (2 Korintiana 4,15), ary ny Kristiana dia maneho ny fahasoavany sy ny famelan-keloka amin'ny fifanatrehana ny hafa (Efesiana 4,32). tsara Andriamanitra (Lioka 18,19; 1Kor 16,34; Salamo 25,8; 34,8; 86,5; 145,9).
«Ny tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra dia avy any ambony, avy amin'ny Rain'ny Fahazavana» (Jakoba 1,17).
Ny fahazoana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra dia fiomanana hibebaka - «sa hamavoinao ny haren'ny fahatsarany ... tsy fantatrao va fa ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka» (Romana 2,4)?
Ilay Andriamanitra mahavita "manao zavatra tafahoatra mihoatra noho izay rehetra angatahintsika na takatsika" (Efesiana 3,20) dia milaza amin'ny mpino hoe "manaova soa amin'ny olona rehetra" satria izay manao soa no avy amin'Andriamanitra (3 Jaona 11).
Natao ho antsika Andriamanitra (Romana 8,31)
Mazava ho azy fa lehibe lavitra noho ny fiteny ara-batana Andriamanitra. «Ny habeny tsy azo jerena» (Salamo 145,3). Ahoana no ahafahantsika mahafantatra azy sy manome taratra ny endriny? Ahoana no ahafahantsika manatanteraka ny faniriany ho masina, be fitiavana, mangoraka, tsara fanahy, mpamindra fo, mamela heloka ary tsara?
Andriamanitra, «izay tsy misy fiovana, na fiovana ny mazava sy ny maizina» (Jakoba 1,17) sy ny toetrany ary ny tanjony feno fahasoavana dia tsy miova (Times 3,6) dia nanokatra lalana ho antsika. Natao ho antsika izy ary mitaky ny hahatongavantsika ho zanany (1 Jaona 3,1).
Ny Hebreo 1,3 dia mampahafantatra antsika fa i Jesoa, ilay Zanak'Andriamanitra, izay noforonina mandrakizay, no tena taratry ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra - "ny endrik'ny toetrany" (Hebreo 1,3). Raha mila sary azo tsapain-tanana ny Ray - Jesosy dia. Izy no "sarin'andriamanitra tsy hita" (Kolosiana 1,15).
Hoy i Kristy: «Nomen'ny raiko ahy ny zavatra rehetra; ary tsy misy mahalala tsara ilay zanaka lahy afa-tsy ny ray ihany; ary tsy misy mahalala ny rainy afa-tsy ny zanakalahy sy izay tian'ny zanany hasambarana » (Matio 11,27).
Ny fomba ahafantarana an'Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny zanany lahy. Mampiharihary ny toetran'Andriamanitra Andriamanitra, ary zava-dehibe amin'ny mino izany satria natao tahaka ny endrik'Andriamanitra isika.